Zvakajairika kuti mumwe kana mapato ese haabvumirani nemutongo kwavari. Iwe unopokana here nemutongo wedare? Ipapo pane imwe sarudzo yekukwirira mutongo uyu kudare rekukwirira. Nekudaro, iyi sarudzo haishande pazvinhu zveveruzhinji zvine mari yemari isingasviki EUR 1,750. Iwe unobva wabvumirana nemutongo wedare here? Ipapo iwe unogona kuramba uchibatanidzwa mune zvinoitika padare. Mushure mezvose, mumwe wako waanogona anogona zvakare kusarudza kukwidza.
UNOZVIPA HERE NEVERDICT YEMAHARA?
> Nguva yekukwirira
> Maitiro acho
> Kwidza nyaya mudare rekutonga
> Mushure mekukwidza
Iko mukana wekumhan'ari unodzorwa muChinyorwa Chechinomwe cheDutch Civil Code of Procedure. Iyi mukana unobva pane musimboti wekubata nyaya yacho muzvinhu zviviri: pakutanga muenzaniso kazhinji mudare uye ipapo mudare redzimhosva. Zvinotendwa kuti kubata nyaya muzvikamu zviviri kunosimudzira mhando yeruramisiro, pamwe nekuvimba kwevagari mukutonga kweruramisiro. Kukwirira kune mabasa maviri akakosha:
• Kudzora basa. Pakukwirira, kumbira dare kuti riongorore nyaya yako zvakare uye zvizere. Dare saka rinotarisa kuti mutongi pakutanga akanzwisisa chokwadi nezvechokwadi, akanyatso shandisa mutemo uye kana akatonga nemazvo. Kana zvisiri, kutonga kwemutongi wekutanga muenzaniso kuchapidigurwa nedare.
• Regedza mukana. Zvinogoneka kuti wakasarudza zvisizvo pamutemo hwaro pakutanga, hauna kugadzira chirevo chako zvakakwana kana kupa humbowo diki pane chirevo chako. Nheyo yekusiiwa izere saka inoshanda mudare redzimhosva. Haisi chete iyo chokwadi chose chinogona kuunzwa kudare zvakare kuti iongororwe, asi iwe sebato rekukwirira unozove nemukana wekugadzirisa zvikanganiso zvawakaita pakutanga. Iko zvakare kune mukana wekupemha kuwedzera mari yako.
Kana iwe ukasarudzira maitiro ekukwirira kudare, iwe unofanirwa kuendesa kukwirira mukati menguva yakati. Kureba kwenguva iyoyo kunoenderana nemhando yenyaya. Kana iyo mutongo une chekuita nemutongo wa court court, une mwedzi mitatu kubva pazuva rekutongwa kuti utore kukwidza mhosva. Wakafanirwa kubata nehupfupikiso mafambiro panguva yekutanga here? Pakadaro, nguva yemavhiki mana chete inonyorera chikumbiro kudare. Vakaita court court Funga uye utonge mhosva yako? Mumamiriro ezvinhu akadaro, iwe unongova nemavhiki maviri mushure mekutonga kukwirira kudare.
Sezvo mazwi ekukwikwidza achisimbisa zviri pamutemo, nguva dzekupedzisira idzi dzinofanirawo kuteverwa zvakanyanya. Saka nguva yekukwirira ndeyenguva yakaoma. Hapana kukwikwidza kuchamiswa mukati menguva ino here? Ipapo iwe wanonoka uye nokudaro hazvigoneke. Izvo chete mune zviitiko zvakasarudzika kuti kukwikwidza kuiswe mushure mekupedzwa kwekufa kwekukwirira. Izvi zvingave zvakadaro, semuenzaniso, kana chikonzero chekumhan'ara kwapera iri mhosva yemutongi iyeye, nekuti akatumira iro kumapato kunonoka.
Muchirevo chekukwikwidza, chinhu chakakosha ndechekuti zvigadziro zvine chekuita nechokutanga chiitiko zvinoshanda kune ino yekukwidza nyaya. Kukwikwidza saka kunoitwa pamwe ne subpoena fomu imwe chete uye nezvinodiwa zvakafanana neiyo yekutanga muenzaniso. Nekudaro, hazvisati zvichidikanwa kuti utaure zvikonzero zvekukwirira. Izvi zvikonzero zvinongofanira kuratidzwa mukutaura kwezvichemo nazvo subpoena inoteverwa.
Zvikonzero zvekukwirira zvese zvikonzero izvo uyo anomhan'arira anofanira kuisa pamberi kuti nharo yakakwikwidzwa yedare mukutanga inofanirwa kuiswa parutivi. Izvo zvikamu zvetonga izvo zvisina zvikonzero zvakaiswa mberi, zvicharamba zviri musimba uye hazvichazotaurwazve pamusoro pekukwirira. Nenzira iyi, nharo pamusoro pekukwirira uye nokudaro battery yepamutemo ine mashoma. Naizvozvo zvakakosha kusimudza chikonzero chekupokana kuchisungo chakapihwa pakutanga. Izvo zvakakosha kuti uzive mune ino mamiriro kuti iyo inonzi general pasi, iyo ine chinangwa chekuunza iyo gakava kuzere kwechirevo, haigoni uye haibudirire. Mune mamwe mazwi: chikumbiro chekukwirira chinofanira kunge chine chirevo chekongiri kuitira kuti zvive pachena kune mumwe mubato mukudzivirira izvo izvo zvinopesana chaizvo.
Chirevo chekunyunyuta chinotevera chirevo chekudzivirira. Kune iro chikamu, mumhan'ari pakukwidza anogona zvakare kuisa pamberi zvikonzero zvinopesana nemutongo wakakwikwidzwa uye kupindura chirevo chemumhan'ari chekunyunyuta Chirevo chekunyunyuta uye chirevo chekudzivirira kazhinji chinogumisa kuchinjaniswa kwenzvimbo pachikumbiro. Mushure mekunge magwaro akanyorwa achinjaniswa, hazvichabvumidzwa kuisa zvirevo zvitsva, kunyangwe kuitira kuti vawedzere chikumbiro. Saka zvinotsanangurwa kuti mutongi haachagona kutarisisa zvikonzero zvekukwidza nyaya zvakaiswa pamberi pechirevo chekukwirira kana kwekuzvidzivirira. Izvo zvinoshandawo kuwedzera kwekutora. Nekudaro, nenzira yekusiyanisa, ivhu richiri kubvumidzwa pane inotevera nhanho kana mumwe munhu apa mvumo yake, chichemo chinomuka kubva mugariro wekupokana kana mamiriro ezvinhu matsva amuka mushure mekunge magwaro akanyorwa aendeswa.
Sepakutanga nzvimbo, denderedzwa rakanyorwa mune yekutanga muenzaniso rinoteverwa nguva dzose kutongwa pamberi pedare. Pane chakasarudzika kune iyi nhungamiro mukukwirira: kutongwa pamberi pedare kungasarudzika uye saka hazvizivikanwe. Mhosva zhinji saka dzinowanzogadziriswa mukunyorwa nedare. Nekudaro, mapato ese ari maviri anogona kukumbira dare kuti rinzwe nyaya yavo. Kana bato richida kunzwiwa pamberi pedare redzimhosva, dare rinofanira kuchibvumira, kunze kwekunge paine mamiriro ezvinhu akakosha. Kusvika panguva ino, kesi-mutemo kurudyi rwekukumbira unoramba uripo.
Nhanho yekupedzisira pamatare edzimhosva mukukwirira ndeayo mutongo. Mukutonga uku, dare rekukwirira richaratidza kana mutongo wekutanga wedare wanga wakarurama. Mukuita, zvinogona kutora kusvika kumwedzi mitanhatu kana kudarika kuti mapato asangane nemutongo wekupedzisira wedare rekukwirira. Kana zvikonzero zvemukwikwidzi zvikasimbiswa, dare rinosendeka mutongo wakakwikwidzwa uye wozogadzirisa nyaya yacho pachayo. Zvikasadaro dare redzimhosva rinotsigira zvine mutsindo mutongo wakakwikwidzwa.
Kwidza nyaya mudare rekutonga
Iwe haubvumirani nesarudzo yedare rekutonga? Ipapo iwe unogonawo kukwezva. Nekudaro, kana uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinetsana nezve mutemo wekutonga, zvakakosha kuti uzive nezvekuti kana zvadaro Panowanzove nenguva yemavhiki matanhatu kubva panguva iyo kududzirwa kwemutongi wekutonga kuchaziviswa, mukati maunogona kuisa kukwirira. Iwe zvakare uchafanirwa kubata nezvimwe zviitiko zvaungatendeukira kumamiriro ekukwirira. Ndeipi dare yaunofanirwa kuenda kune inoenderana nerudzi rwemhosva:
• Kuchengetedzeka munharaunda uye vashandi vehurumende mutemo. Mhosva dzekuchengetedzwa kwemagariro pamwe nemutemo wevashandi vehurumende dzinoitirwa mukukwikwidza neCentral Board of Appeal (CRvB).
• Mutemo wekutonga kwehupfumi uye kururamisira. Matanho ari muchinyorwa che, pakati pevamwe, Mutemo weKukwikwidza, Mutemo wePosvo, Commodities Act uye Telecommunication Act unogadziriswa mukukwikwidza neBoard of Appeal for Business (CBb).
• Mutemo wekupinda mune dzimwe nyika uye zvimwe zvinhu. Dzimwe mhosva, kusanganisira nyaya dzekuenda kune dzimwe nyika, dzinotongwa mukukwikwidza neDare Rinodzora Dare reChunga reNyika (ABRvS).
Kazhinji, mapato anoomerera pakutongwa kwedare rekukwirira uye nyaya yavo inogadziriswa pakukwidza. Nekudaro, iwe unobvumirana here nemutongo wedare mukukwirira? Zvino pane imwe sarudzo yekuisa cassation kuDutch Supreme Court kusvika mwedzi mitatu mushure memutongo wedare rekukwirira. Iyi sarudzo haishande pane zvisarudzo zveABRvS, CRvB uye CBB. Mushure mezvose, zvirevo zvemitumbi iyi zvine kutonga kwekupedzisira. Saka hazvigoneke kupokana nekutonga uku.
Kana mukana wecassation uripo, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti hapana nzvimbo yechokwadi yekuongorora kwekupokana. Zvikonzero zvecassation zvakare zvine mashoma. Mushure mezvose, cassation inogona kungoiswa chete mukati sezvo matare epasi asina kunyatsoshandisa mutemo. Iyo maitiro anogona kutora makore uye anosanganisira mitengo yakakwira. Izvo zvakakosha kuti ubvise zvese kubva munzira yekukwirira. Law & More inofara kukubatsira neizvi. Mushure mezvose, kukwikwidza maitiro akaoma mune chero kutonga, kazhinji kunosanganisira zvido zvikuru. Law & More magweta inyanzvi mune dzese mhosva, dzekutonga pamwe nemutemo wehurumende uye vanofara kukubatsira mukukwidza nyaya. Une imwe mibvunzo here? Ndokumbirawo mubate Law & More.